Fanambarana 4 azonao zahana amin'ny data momba ny Salesforce | Martech Zone
Fanambarana 4 azonao zahana amin'ny data Salesforce
Talata, Aogositra 18, 2015 Alakamisy 5, 2015 Bonnie Crater
Nilaza izy ireo fa ny CRM dia mahasoa ihany toy ny angona ao. Mpivarotra an-tapitrisany no mampiasa Salesforce, saingy vitsy no manana fahatakarana marim-pototra momba ny angon-drakitra nosintonin'izy ireo, ny metatra handrefesana azy, avy aiza, ary hatraiza ny hatokisany azy. Raha mitohy miha-data hatrany ny marketing, izany dia manamafy ny filàna mahatakatra ny zava-mitranga any ambadiky ny sehatra miaraka amin'ny Salesforce, ary koa ireo fitaovana hafa.
Ireto misy antony efatra tokony hahalalan'ny mpivarotra ny angon-drakitra anatiny sy ivelany, ary ny lakilen'ny fahatakarana izany data izany.
Araho amin'ny alàlan'ny fantsonao ny volan'ny firaka
Ny volan'ny firaka dia iray amin'ireo fandrefesana mahitsy indrindra, ary ny metrika voalohany tokony hijeren'ny mpivarotra rehetra. Ny volume dia milaza aminao ny isa mitarika nateraky ny marketing (sy ny departemanta hafa). Izy io koa dia manome anao fahatsapana raha afaka mahatratra ny tanjonao ianao amin'ny fanontanianao, ny torolàlana mendrika (MQL) ary ny fifanarahana mihidy.
Azonao atao ny manara-maso ny refin'ny volavola ao amin'ny Salesforce amin'ny alàlan'ny fametrahana ny tatitra hahitana ny volanao isaky ny sehatra fantsom-pivoahana, ary avy eo manangana tabilao hita maso izany data izany. Ho azonao atao ny mahita ny volan'ny firaketana nahatratra ny dingana tsirairay.
Ampiasao ny angon-drakitra ampiasain'ny fantsonao hamaritana ny tahan'ny fiovam-ponao eo anelanelan'ny dingana
Rehefa mivezivezy ao amin'ny fantsona ny fitarihana dia zava-dehibe ny mahatakatra ny fomba niovan'izy ireo tamin'ny sehatra iray. Izany dia ahafahanao mahatakatra ny fahombiazan'ny programa marketing mandritra ny tsingerin'ny varotra, ary koa ny mamantatra ireo faritra misy olana (izany hoe ny fiovam-po ambany amin'ny dingana iray mankany amin'ny manaraka). Ity kajy ity dia manome fahitana bebe kokoa noho ny isa volavola manta satria mampiharihary hoe iza amin'ireo fampielezan-kevitra manana taha ambony indrindra amin'ny tahan'ny fanekena ny varotra sy ny tahan'ny fifampiraharahana.
Azonao atao ny mampiasa ireo fomba fijery ireo hanatsarana ny fizotry ny varotrao ary hanomezana kalitao avo lenta amin'ny varotra. Mety ho sarotra ny manara-maso ny tahan'ny fiovam-po ao amin'ny Salesforce mahazatra, fa raha manamboatra endrika sy tatitra manokana ianao, dia azonao atao ihany koa ny maka sary an-tsaina azy ireo amin'ny dashboard. Safidy tsara ny formula famintinana satria mamela anao hanivana sy hanangona ny tatitrao izy ireo hahita ny tahan'ny fiovam-ponao amin'ny refy isan-karazany.
Asio tombo-kase ny fotoana rehetra ny valin'ny varotra hanarahana ny hafainganam-pandehan'ireo lalan-jotra
Ny haingam-pandeha no metrika fandefasana fantsona manan-danja farany hanarahana. Ny haingam-pandeha dia mampiseho aminao ny fitarihana haingana ny fandrosoana amin'ny alàlan'ny fantsom-barotra sy fivarotana anao. Mampiharihary koa ny halavan'ny tsingerin'ny fivarotanao sy mampiseho ny tavoahangy eo anelanelan'ny dingana. Raha hitanao fa mitongilana ao anaty tsimok'aretina mandritra ny fotoana maharitra ny fitarihana avy amin'ny fampielezan-kevitra manokana, dia mety haneho tsy fifankahazoan-kevitra izany, fotoana fohy hamaly, na fomba tsy mifanaraka. Miaraka amin'ity fampahalalana ity, ny mpivarotra dia afaka miasa amin'ny famahana izany olana izany ary avy eo manafaingana ny fandrosoan'ny fitarihana amin'ny alàlan'ny fantsona.
Azonao atao ny manara-maso ny hafainganam-pandeha amin'ny tatitra an'ny Salesforce amin'ny alàlan'ny fampiharana fitantanana fampisehoana marketing amin'ny antoko fahatelo, toy ny amin'ny Full Circle.
Mandehana mihoatra ny fanondroana tokana nentim-paharazana sy fandrefesana ny fitaomana ny fampielezan-kevitra
Na dia azonao atao aza ny manara-maso ny lozisialy farany mikasika ny varotra Salesforce, matetika ny mpivarotra dia mila fahatakarana lalindalina kokoa ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitr'izy ireo. Mahalana ny fampielezan-kevitra iray no tompon'andraikitra amin'ny famoronana fotoana iray. Ny fampiharana toa ny Fampiroboroboana ny fampielezan-kevitra feno dia manampy anao hahazo angon-drakitra ara-barotra tsara kokoa miaraka amin'ny mari-pahaizana maro karazana mikasika sy maodely misy fiantraikany amin'ny fampielezan-kevitra. Ireo dia ahafahanao manome ny habetsaky ny vola miditra amin'ny fampielezan-kevitra isaky ny misy fotoana ary asehoy hoe iza amin'ireo fampielezan-kevitra no tena nanan-kery tamin'ny famoronana fotoana iray hivarotra.
Tags: Attributionfantsom-panentananafitaomana fanentananaCRMfeno faribolanacrm boribory fenohafainganam-pandehafantson'ny fantsonatandroka fivarotanasalesforcemikasika ny fanamelohana
Ny mahatsara sy maharatsy ny fanentanana imailaka opt-in
Statistics Marketing amin'ny finday ho an'ny 2015